Wasiirka Howlaha Guud oo tababar ku Qabtey wasaarada + sawiro – Beegsonews-Wararka maanta
Home WARARKA MAANTA Wasiirka Howlaha Guud oo tababar ku Qabtey wasaarada + sawiro
Wasiirka Howlaha Guud oo tababar ku Qabtey wasaarada + sawiro
Siminaarkan oo maanta loo furay shaqaaalaha iyo maamulka wasaaradda Howlaha guud iyo dib u Dhiska Xukuumadad Federaalka Soomaaliya ayaa ujeedkiisu yahay dejinta qorsha Istraatiijiyada Shaqo ee wasaaradda,kaasi oo ay bixin doonaan khuburo aqoon durugsan u leh arrimahaasi,wuxuuna socon doona muddo 3 maalmood ah.
Munaasabadda Furitaanka waxaa goob joog ka ahaa wasiirka,wasiir kuxigeenka, maamulka iyo shaqaalaha wasaaraddaasi,iyadoo mas’uuliyiintu ay sheegeen in ay ahmiyad siinayaan sidii loo tayayn lahaa shaqada wasaaradda iyo shaqaalaheeda, Agaasimaha Guud ee wasaaraddaasi Axmed Maxamed Iman ayaa si kooban u sharaxay ujeedka tababarkan,wuxuuna xusay in maalmaha uu socdo tababarkan ay xoogga ku saari doonaan sidii sare loogu qaadi lahaa tayada qorshaha Istraatiijiyada shaqo ee wasaaradda.
Mudane Cabdi Aadan Hoosow wasiirka Howlaha guud iyo dib u Dhiska Soomaaliya oo la hadlay shaqaalaha ayaa sheegay in looga baahanyahay shaqaalaha in ay waxbadan faa’ideystaan si ay kaalintooda uga qaataan dib u dhiska dalkooda.
“Maalintii aan I maanayay xafiiska waxaan balanqaaday shaqo,warka aniga shaqada ayaan ka jeclahay,wasaaraddan waxaa ay shaqadeedi tahay in dalkaan oo dhan ay dhisto,Wakaalado badan ayaa ka baxatya,tayaynta shaqaalaha iyo agaasime waaxeedyada waa arrin aad muhiim u ah,si ay waajibaadkoodi u gutaan,shaqaalaha hadii aysan tayaysnayn waxba ma qaban karaan,qof aan wax maamuli Karin oo aan tayo lahayn ma joogi karo”. Ayuu yiri wasiir Hoosow.
Tani ayaa dhiirogelinaysaa in howlaha shaqo ee wasaaradda ay noqdaan kuwo leh tayo sare oo loogu adeego bulshada Soomaaliyeed.
Previous articleMadaxweyne Farmaajo oo u Duuley Ruushka
Next articleWasiirka Shaqada iyo Arrimaha Bulshada F.S oo sheegtay in ay hayaan $.15-milyan
Itoobiya oo sheegtey iney qabqabataa xubno ka mid ah “Al...